BurstCoin စျေး - အွန်လိုင်း BURST ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BurstCoin (BURST)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BurstCoin (BURST) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BurstCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $12 959 595.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BurstCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BurstCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BurstCoinBURST သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0054BurstCoinBURST သို့ ယူရိုEUR€0.00458BurstCoinBURST သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00413BurstCoinBURST သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00493BurstCoinBURST သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0491BurstCoinBURST သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0341BurstCoinBURST သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.12BurstCoinBURST သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0201BurstCoinBURST သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0072BurstCoinBURST သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00754BurstCoinBURST သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.123BurstCoinBURST သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0419BurstCoinBURST သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0286BurstCoinBURST သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.405BurstCoinBURST သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.901BurstCoinBURST သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00742BurstCoinBURST သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00816BurstCoinBURST သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.168BurstCoinBURST သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0377BurstCoinBURST သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.571BurstCoinBURST သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩6.45BurstCoinBURST သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.05BurstCoinBURST သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.397BurstCoinBURST သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.15
BurstCoinBURST သို့ BitcoinBTC0.0000005 BurstCoinBURST သို့ EthereumETH0.00001 BurstCoinBURST သို့ LitecoinLTC0.00009 BurstCoinBURST သို့ DigitalCashDASH0.00006 BurstCoinBURST သို့ MoneroXMR0.00006 BurstCoinBURST သို့ NxtNXT0.449 BurstCoinBURST သို့ Ethereum ClassicETC0.000758 BurstCoinBURST သို့ DogecoinDOGE1.55 BurstCoinBURST သို့ ZCashZEC0.00007 BurstCoinBURST သို့ BitsharesBTS0.208 BurstCoinBURST သို့ DigiByteDGB0.206 BurstCoinBURST သို့ RippleXRP0.018 BurstCoinBURST သို့ BitcoinDarkBTCD0.000191 BurstCoinBURST သို့ PeerCoinPPC0.0197 BurstCoinBURST သို့ CraigsCoinCRAIG2.53 BurstCoinBURST သို့ BitstakeXBS0.236 BurstCoinBURST သို့ PayCoinXPY0.0968 BurstCoinBURST သို့ ProsperCoinPRC0.696 BurstCoinBURST သို့ YbCoinYBC0.000003 BurstCoinBURST သို့ DarkKushDANK1.78 BurstCoinBURST သို့ GiveCoinGIVE12 BurstCoinBURST သို့ KoboCoinKOBO1.26 BurstCoinBURST သို့ DarkTokenDT0.00498 BurstCoinBURST သို့ CETUS CoinCETI16